Kubantu abangakaze bazenze lezi zibalo ngaphambili, ake sibheke umthelela. Inkampani yakho inamakhasimende angama-5,000 500, ilahlekelwa yi-99 kuwo unyaka nonyaka, futhi ngayinye ikhokha u- $ 15 ngenyanga ngensizakalo yakho ngenzuzo yenzuzo engu-XNUMX%.
Uma i-CAC yakho ingama- $ 20 ngeklayenti ngalinye, lokho kuqinile buyela ekutshalweni kwezimali, usebenzisa u- $ 10k ukufaka amakhasimende angama-500 asele Kepha kuthiwani uma ungakhuphula ukugcinwa okungu-1% ngokusebenzisa enye i- $ 5 ngekhasimende ngalinye? Lokho kungaba ngama- $ 25,000 asetshenziselwe uhlelo lokugcina. Lokho kuzokhulisa i-CLV yakho isuke ku- $ 1,782 iye ku- $ 1,980. Ngesikhathi sokuphila kwamakhasimende akho ayi-5,000 XNUMX, usanda kukhulisa umugqa wakho ophansi cishe ngamaRandi ayisigidi.
Tags: ukutholwa kuqhathaniswa nokugcinwa kabushaIzindleko Zokubanjwaizindleko zokutholwa kwamakhasimendeukutholwa kwamakhasimende nokugcinwaIsilinganiso Sokuheha Amakhasimendeinani lempilo yekhasimendeukugcinwa kwamakhasimendeisilinganiso sokugcinwa kwamakhasimendeinfographicinvest